01/03/15 ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
Tuesday, March 31, 2015 Mr.Win Hlaing No comments
♪ Techspace Journal Vol (4), Issue (1) (31.3.15) ♫
Tuesday, March 31, 2015 Pyae Phyo (MMiTD) No comments
Techspace ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ်အင်္ဂါ နေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Techspace ဂျာနယ်ကို ဖတ်ချင်သူများအတွက် မူရင်းဆိုဒ်ကနေပြီး ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ Techspace ဂျာနယ် ၀ယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ Techspace Journal Vol(4), Issue (1) ကိုတင်ပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ 31-March ရက်နေ့ထွက်လေးပါ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင်မပြေသောနေ ရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
♪ TeamViewer Premium v10.0.40798 + Crack & Portable ♫
TeamViewer ကတော့ လူတိုင်းနီးပါး သိကြမှာပါ မသိသေးသူအတွက် ရှင်းပြပါမယ်။ TeamViewer က ဥပမာ ကို့ရဲ့စက်တခုခု ဖြစ်လို့ကိုက ပြန်မပြင်တတ် အဲလိုဆိုရင် အဝေးမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို အကူညီတောင်းဝင် ပြင်ခိုင်းလို့ရတဲ့ ဆောဝဲလေးပါ။ အင်တာနက်လိုင်းရှိရုံနှင့် မိမိကွန်ပျူတာကနေ တခြား ကွန်ပျူတာကို ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးနေပါစေ၀င်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဆောဝဲကို install ပြီးတာ နဲ့ ကိုယ်ရဲ့ You ID နှင့် Password ပြနေလိမ့်မည်။ မိမိပေးဝင်ချင်သည့် သူငယ်ချင်းကို ကိုယ်ရဲ့ID နှင့် Password ပေးလိုက်ရင် ကို့ကွန်ပြူတာ ကို သူငယ်ချင်းက ၀င်ပြင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
TeamViewer ကိုမသုံးတတ်သေး တဲ့ သူငယ်ချင်း များ ကတော့ ဒီလင့်မှာ စာအုပ်ဒေါင်းပြီး အမြည်းသဘော အနေနဲ့ လေ့လာနိုင်ပါပြီ။ အသေးစိတ်ကိုတော့ အောက်မှာဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေသုံး လာကြတာ Free license တွေဖြစ်တဲ့ဆော့စ်ဝဲရဲ့အနှစ်သာရ ကိုအပြည့်အ၀အခံစားရဘူးခင်ဗျ။သုံးဆွဲတဲ့အခါ Files,Data စသည်တို့ကိုလွှဲပြောင်းတဲ့အခါမှာ အခက် အခဲတွေရှိတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကွန်အားနည်းရင် အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ Full License ဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာကွန်အားနည်းနေရင်တော့ကောင်းစွာအလုပ် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ဆုံးမှာ Download Link ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ Crack ပါပေးထားပြီး Portable သုံးချင်သူများအတွက် Portable Version ကိုပါထည့်ပေးထားပါသေးတယ်။
♪ နာမည်ကြီး Antivirus အတွက်လိုင်စင်ကီးပေါင်းများစွာ - ESET NOD32, Kaspersky, Avast, Dr.Web, Avira [782 KB] ♫
နာမည်ကြီး Antivirus တွေအတွက် License Key ပေါင်းများစွာကို စုစည်းပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ 28.3.2015 နေ့မှာထွက်ထားတဲ့ License Key အသစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Antivirus တစ်မျိုးကို License Key တွေအများကြီးတင်ပေးထားတာပါ မိမိအဆင်ပြေတာနဲ့သာရွေးချယ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ File Size ကလည်း 782Kb လေးသာရှိတာမို့လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာပဲဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ပါဝင်တဲ့ Antivirus တွေကတော့ ESET NOD32, Kaspersky, Avast, Dr.Web, Avira တွေ ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ် Version တွေကိုတော့ အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ ဗျာ။
Next Launcher ထဲမှာ ဒီဇိုင်းအလန်းဆုံး - Next Launcher 3D Manuals
Tuesday, March 31, 2015 ပုသိမ်နည်းပညာ No comments
Next Launcher ထဲမှာ ဒီဇိုင်းအလန်းဆုံး - Next Launcher 3D Manuals လေးပါ ဖုန်းမှာ launcher ဒီဇိုင်း အလန်းတွေ နဲ့မှသုံးခြင်တဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက်ပါ အောက်မှာဒေါင်းပါ (ပုသိမ်နည်းပညာ)
– Icon arrangement settings
– Select icons by gesture
– Arrange icons by gesture
– Add icons on Dock
– Add icons to screen
– Select icons
– Create folder on screen
– Create folder in App Drawer
– Open home screen menu
– Show notification
– Gesture on Dock
– Add Next or GO widget
– Add system widget
– Edit Next or GO widget
– Mix theme mode
– Floating mode
– Effects settings
– Version features
More tips: goforandroid.com/GDTEn/faq.aspx?softid=55&nav=99
Offered By : GO Launcher Dev Team
♪ USB မှ Virus ၀င်ခြင်းကို 100% ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ - USB Disk Security v6.5.0 Cacked Version ♫
Tuesday, March 31, 2015 Pyae Phyo (MMiTD) 1 comment
ကွန်ပြူတာကို Virus ကိုက်ပြီဆိုရင် အများအားဖြင့်တော့ USB ကနေ Virus ၀င်ပြီး ကိုက်တာများပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အခုကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တာကိုတော့ အားလုံးဘဲ ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါ တယ်။ သူ့ရဲ့မူရင်းမှာတော့ USB ကနေ Virus ၀င်ခြင်းကို 100% ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကို ခိုင်ခိုင် မာမာ အာမခံ ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ တကယ်လည်းကောင်းပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်းဒါလေးပဲ သုံးထားပါတယ်။ အသုံးပြုရတာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိပြီး Antivirus တွေနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ USB လို့ သုံးနှုန်းထားတယ်ဆို တာက ခြုံငုံပြီးပြောပြထားတာပါနော်။ Pen Drives , USB Cameras , USB Flash cards , USB MP3 players , USB Audio players , External hard drives , Pocket PCs , Mobile phones , iPod’s and iPhone’sv စတာတွေ ကိုလည်း USB အဖြစ်သက်မှတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီကောင်တွေထဲကလည်း Virus မ၀င်နိုင်တော့ပါဘူးဗျာ။ ဒီထက်အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်အောက်မှာ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ Full Version အတွက် Serial Key တွေ Crack တွေ Patch တွေတစ်ခုမှမလိုပါဘူး။ Cracked လုပ်ထားပြီးသား Setup File ကိုတင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ ဒီတိုင်း Install လုပ်ပြီးသုံးရုံပါပဲ။
--->How to Install USB Disk Security 6.5.0<---
Step 3- Enjoy USB Disk Security 6.5 Full Version
CPU Control Pro v3.0.0 Apk လေးပါ ဖုန်းမှာ CPU လေးနေတာတွေကို CPU Control လေးနဲ့ညှိပြီး သုံးနိုင်ပါတယ် service သမားတွေ အဓိကဆောင်ထားသင့်တဲ့ကောင်လေးပါ (ပုသိမ်နည်းပညာ)
CPU Control Pro v3.0.0 Apk | 1 MB | Resumable Links | Requires : Android 2.1 and up |
Call recorder (Full) v3.0.3 Apk |7MB | Resumable Links | Requires : Android 4.0 and up |
Fixed bug when you run the application for some phones.
Fixedabug where the app on some phones do not respond to the challenges.
Fixedabug in the fickle with the application.
Temporarily remove the possibility of grouping. This isanecessary measure due to errors when opening the program withalarge number of records.
Fixed error when working withalarge number of records.
သင့်ဖုန်းကို ဗိုင်းရန်မ၀င်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ - CM Security AppLock & AntiVirus Apk v2.4.8
သင့်ဖုန်းကို ဗိုင်းရန်မ၀င်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ - CM Security AppLock & AntiVirus Apk v2.4.8 လေးပါ ဗားရှင်းအသစ်လေးထွ့်လာလို့
Free Download CM Security- AppLock&AntiVirus Apk For Android from . According to the report made by independent antivirus and security institute AV-TEST (http://www.av-test.org/), announced in July 2014, CM Security has been rated #1 due to its usability and 100% virus detection rate.
Tuesday, March 31, 2015 AungKyaw No comments
♪ Techspace Journal Vol (4), Issue (1) (31.3.15) ♫...
♪ TeamViewer Premium v10.0.40798 + Crack & Portabl...
♪ နာမည်ကြီး Antivirus အတွက်လိုင်စင်ကီးပေါင်းများစွ...
Next Launcher ထဲမှာ ဒီဇိုင်းအလန်းဆုံး - Next Laun...
♪ USB မှ Virus ၀င်ခြင်းကို 100% ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ...
သင့်ဖုန်းကို ဗိုင်းရန်မ၀င်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ -...
Photoshop ဖြင့်မျက်နှာများမှ ဝက်ခြံများကို ဖျက်နည်...
♪ Deep Freeze Enterprise v8.22.220.4800 + Keygen &...
မိမိရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို အွန်လိုင်းမှာ လွယ်တက...
ဖုန်းခေါ်ဆိုသူရဲ့မျက်နှာကို သင့်ဖုန်းစက်ခရင် အပြည့်...
ဖုန်း user တွေဆောင်ထားသင့်တဲ့ - Root Check v2.2.1
ဖုန်းမှာ အိုင်ဖုန်းဒီဇိုင်းလေးနဲ့လန်းနိုင်မယ့် - i...
နပန်း ၀ါသနာရှင်တွေအတွက် ဂိမ်းကောင်းလေး - WWE Immor...
ဖုန်းမှာ Video edit ကိုပရိုတစ်ယောက်လို သုံးနိုင်မယ...
ဒီဇိုင်းလန်းတဲ့ - Orbit UI – Icon Pack v1.1.2 Apk
App Backup & Restore v3.2.6 apk (latest version)
ဆာမူရိုင်းဖိုက်တင်ဂိမ်းလေး - Samurai II: Vengeance...
ပိုတိုရှော့အတွက် 3D frame action လန်းလန်းလေး Size(...
Hyperionics Hypersnap 8.04.08 With Keygen Full Ver...
Ashampoo Snap 8.0.1 With Patch Full Version Size(5...
♪ ခပ်ကြမ်းကြမ်ပစ်ခတ်ရမယ့် Action Game ကြီး - Moder...
Android ဖုန်းများအတွက် အလှပဆုံး-Hola Launcher 1.6....
♪ Internet Download Manager v6.23 Build9Final + ...
Tech Space Journal ( Vol-3, No-51 )
Digital Life Journal ( Vol-3, No-48 )
Juice ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ ဖုန်းမှာလန်းခြင်သူတွေအတွက် - ...
ဖုန်းခေါ်ဆိုပြောသမျှကို မှတ်ထားပေးနိုင်တဲ့ - Call r...
ဖုန်းမှာ Locker အလန်းလေးနဲ့လန်းခြင်သူတွေအတွက် - C ...
သင့်ဖုန်း Ram လေးနေတာတွေကိုရှင်းပေးမဲ့ - Smart Boo...
နာမည်ကြီးအက်ရှင်းဂိမ်း-Modern Combat 5: Blackout v...
ကာလာအလန်းလေးနဲ့ ဖုန်းမှာလန်းနိုင်တဲ့ - Sense Live ...
ဖားလေးကို သကြားလုံးကြွေးရတဲ့ဂိမ်းလေး - Cut the Rop...
မြို့ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ ဂေါ်ဇီလာကို နှိမ်နှင်းရမဲ့ဂိမ်...
မြန်မာပြည် အိုင်တီလောကမှာ Coworking space ခေတ်ထတဲ့...
မိမိဖုန်းကိုသွက်လက်မြန်ဆန်မှုကိုပေးမယ်-Smart RAM Bo...
ဘေးဘောင်မပါဝင်သည့် Oppo R7 စမတ်ဖုန်း ဗွီဒီယို တရုတ...
မြန်မာမှုပြုထားသော Line Application စတစ်ကာများအား သ...
သုံးစွဲသူ၏ post အဟောင်းများကို ပြန်လည်ပြသပေးမည့် O...
အခွေ ဘန်းချင်သူများအတွက် Astroburn Pro
♪ Whos On My WiFi Ultimate v2.1.9 + Keygen ♫
Android Phones နှင့် Android Tablets များအတွက် D...
♪ NetGuide Journal Vol (3), Issue (79) (25.3.14) ♫...
Netguide Journal ( Vol-3 , Issue-78 )
♪ စက်ရုပ်လူသားအက်ရှင်ဂိမ်း - Overkill3v1.1.8 Apk...
ဖုန်းမှာ iphone ဒီဇိုင်း ဗီဒီယိုတွေပုံတွေကြည့်ရှု့န...
GO Launcher တွေမှကြိုက်တဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက် - Grey T...
ဖုန်းမှာ 3D နာရီဒီဇိုင်းလေးနဲ့လန်းနိုင်မယ့် - Best...
ကားသူခိုးဂိမ်းကောင်းလေး - Grand Theft Auto: San An...
ဖုန်း icon လေးတွေကို တမျိူးလန်းစေမယ့် - Bliss – I...
အက်ရှင်ဂိမ်းကောင်းလေး - SHADOWGUN v1.6.2 Apk
Windows 10 Pro Preview Build 10041 (32/64bit)
Doblon Power CD+G Burner 2.06
iTunes အသုံးပြုနည်း PDF
Google က Hardware များအတွက် Google Store ကို ဖွင့်...
♪ Digital Life Journal Issue Vol-3 ၊ Issue 48 (23....
Android Lollipop 5.0 တွင် On-Body Unlock လုပ်ဆောင်...